uhlobo-USB drive ekhombisa uhlelo zamafayela ezingabonwa (RAW yesistimu yefayela)
Uma wake wazama yokufometha Imininingwane ye-USB drive, niyazi ukuthi kungenziwa ihlelwe ku -FAT isistimu yefayela noma NTFS. Nokho, i-USB drive nge uhlobo abangaziwa ka isistimu yefayela (i-RAW Ifayela System) ayikwazi ihlelwe ku kungenzeka ukuthi isistimu ifayela FAT noma NTFS. Kulokhu, awukwazi ukufinyelela idrayivu nokufunda amafayela kuso. Okwenza isimo sibe sibi, awukwazi ngisho ukuhambisa imininingwane ngaphakathi idivayisi ehlukile USB. Lokhu kusho ukuthi awukwazi ukufinyelela idatha ngaphakathi ye-USB drive uma ungakwazi ukuxazulula le nkinga ye-ezingaziwa uhlobo idatha. Empeleni kukhona indlela ukuze uthole idatha kusuka idrayivu ye-USB.
Iphutha: I-USB-flash drive awufomethiwe. Kungani flash drive waqala ukubonisa uhlobo elingacacisiwe kohlelo fayela?
Ngokwemvelo yabo, USB-ngemoto kusengozini. Iqiniso lokuthi uhlelo lwabo ifayela iba engaqinisekile, ngezinye izikhathi kufakazela ekhombisa Iphutha: "Disk awufomethiwe". Kulesi umlayezo, i-Windows abashukumisela wena ukufometha flash drive, naphezu kweqiniso lokuthi une khona zingagcinwa eziningi amafayela ezibalulekile. Uma ufaka i-USB flash drive ku-USB port kudeskithophu yakho noma kabili uchofoza isithonjana se-USB-drive e "Computer yami", ungase uthole umyalezo wokuthi kufanele ihlelwe ngaphambi kokuthi ulisebenzise isicelo ukufometha. Uma ucindezela "Khansela" inkinobho, uhlelo lokusebenza ubika nephutha, nokuthi idrayivu ayifinyeleleki. Ngokuphambene, uma uchofoza "Disk Ifomethi", uzolahlekelwa wonke amafayela agcinwe kwi abezindaba. Iphutha ngenhla kubonisa ukuthi isistimu yefayela ye-USB drive isibe lingaqinisekile.
Mahhala yokutakula idatha kusuka USB drive uhlelo nanini-ifayela futhi ulungise le nkinga ngaphandle kokulahlekelwa idatha
Uma idrayivu yefuleshi uhlelo nanini-ifayela zibalulekile kithi idatha, kanye nokufinyelela kuzo akunakwenzeka ukubuyisela idatha udinga ukusebenzisa isofthiwe ukutakula idatha ungalulama yimaphi amafayela kusukela flash drive, bese kuholele ukufometha idrayivu yokuqala yalo isistimu yefayela. Konke lokhu ikuvumela ukuba ukuqinisekisa ukulondeka alulame idatha.
Download isofthiwe khulula iCare Data Recovery yokutakula idatha Mahhala, yifake kukhompuyutha yakho, futhi ugijime.
Faka flash drive ku-USB-port kwikhompyutha. Endabeni yokutakula idatha amamojuli ezine iwindi hlelo, kufanele ukhethe module "Deep Scan Lokubuyisela" (scan ezijulile nokubuyiselwa). Gqamisa drive kusuka ofuna alulame idatha yakho ezibalulekile, bese ucindezela inkinobho "Buyisa" (ukubuyisela).
Linda kuze kube sekupheleni isenzo. Uma inqubo usuphothuliwe, lo yi ziyobonakala njengoba isikhipha uhlu lwezihloko. Phawula ngodonga bese uchofoza "Bonisa Amafayela" (show) amafayela. Uzobona wonke amafayela.
Ku-window Ukukhetha wonke amafayela ofuna ukubuyisela, bese uchofoza "Londoloza Amafayela" inkinobho (ulondoloze amafayela). Udinga ukukhetha noma udale ifolda ukulondoloza amafayela livuke yimuphi omunye isitoreji medium.
Ukufometha-USB idrayivu uhlelo yayo yasekuqaleni ifayela.
Kungani uhlelo ifayela, USB flash drive kuba ezingaziwa?
Njengoba yaziwa, USB-flash drive ingasetshenziswa for ukugcina futhi ukufunda idatha, ngakho-ke kulula kakhulu behlaselwa igciwane lapho uxhumeke kukhompyutha, okungaholela umonakalo isistimu yefayela, kanye nokungakwazi kwalolu ukuzimisela yayo. umonakalo okunjalo isistimu yefayela kungabuye zibangelwe ezinye izizathu: amaphutha ufometha, ukuvalwa ngephutha yesistimu yokusebenza, amandla okhuphuka, ufometha, imikhakha ezimbi, ukususwa izigaba yephutha yomsebenzisi, njll
Indlela yokuzivikela ekonakaleni uhlelo ifayela flash?
Ungasusi-USB flash drive ngesikhathi kusetshenziswa.
Sebenzisa isofthiwe ezinhle-anti-virus ukuze azivikele ukungcoliswa induku yakho.
Yenza i-chkdsk umyalo, esimweni esingafanele ikhompyutha ukuvala shaqa.
Kanjani ukuze uthole amandla amanzi? Amathiphu mfunda-makhwelo bili
Ukulungisa izesekeli zamafasitela epulasitiki ngezandla zakho
Umshwalense ngaphandle komkhawulo: ikhambi ekahle abanikazi imoto
Izitatimende mayelana Lermontov nezinye izimbongi. Izitatimende zabantu ezinkulu ku Lermontov
Imikhiqizo engcono kakhulu yesikhumba esihle
Gemma Atkinson: Biography futhi Filmography
Ukwelashwa kaltsiviroza: isikimu
Isikrini osayizi Smartphones: yimuphi engcono ukukhetha futhi yiziphi nemingcele?